असहिष्णु शाहीकाल – sunpani.com
सुनपानी । २० बैशाख २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
बाँकेबाट सुरु महिला क्रिकेटले देशव्यापी चर्चा बटुल्यो । म निकै उत्साही थिएँ । महिला क्रिकेटको उदयमा नेतृत्व गरेकाले क्रिकेट विकासमा थप जिम्मेवारी पाउने आशा जागेको थियो । तर, हामीले प्रतियोगिता सुरु गर्नु एक महिनाअघि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर आफै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका थिए । उनको सरकारले क्यान विघटन गरिदियो । पुनःगठित क्यानमा म परिन, जिम्मेवारविहीन बनाइयो । युद्ध जितेको सिपाहीले तक्मा पाउँछ, मैले पनि महिला क्रिकेट शुभारम्भ गरेर ठूलै युद्ध जितेको ठानेको थिएँ । तर, शाही सरकारले मलाई हटायो र क्षेत्र नं. ५ नेपालगन्ज हेर्ने गरी सुनिलसिंह हमाललाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत ग¥यो । केन्द्रीय सदस्य नै क्षेत्रीय अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । मेरो कार्यसमितिका सचिव हमाल अध्यक्ष हुँदा धेरै दुःख मनाउ गर्नुपर्ने त थिएन । कम्तीमा उनी राम्रोसँग क्रिकेट बुझेका व्यक्ति थिए । मेरा लागि उनी सधैं ‘मम्मु दाइ’ हुन् । तर, त्यो घटनाले क्रिकेटबाट मलाई पाखा लगाउन खोजेको महसुस चाहिँ मैले गरेँ । २०६० चैतमा किशोरबहादुर सिंहले राखेपको बागडोर सम्हालेसँगै मलाई क्यानमा मनोनीत गरिएको थियो । पछि उनैले मलाई बाहिर पठाए । २०६२ साउन ५ गते म जिम्मेवारीमुक्त भएपनि पहिलो महिला क्रिकेट सम्पन्न भएपछि रिपोर्ट तयार गर्ने र निकासा भुक्तानीमै केही समय बित्यो ।
प्लान इन्टरनेसनलसँग अझै ठूलो साझेदारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला जिम्मेवारीविहीन हुँदा थोरै पीडा पनि महसुस गरेको थिएँ । क्षेत्रीय अध्यक्ष हुनासाथ हमालले मिलेर अघि बढ्लान् भन्ने ठानेको थिएँ । तर, उनको ध्यान आर्थिक कारोबारमा मात्र देखियो । त्यतिबेला क्यानले वार्षिक ५० हजार अनुदान दिन्थ्यो । नवगठित समितिले त्यही हिसाबका लागि बारम्बार ताकेता गरिरह्यो । म सधैँ पारदर्शितामा विश्वास गर्छु । खेल्न जाँदासमेत भत्ता र भाडामा आफ्नो अधिकारका लागि थुप्रैपटक आवाज उठाएको छु । संस्थागत कारोबार त झन् सबैले बुझ्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ । त्यसैले आयव्ययको कागजपत्र सङ्कलन गर्दै थिएँ । तर, नवगठित समितिले बुझबुझारथ र आर्थिक हिसाबकिताबका लागि निकै दबाब दियो । अपमानित गर्ने गरी ताकेता गरेपछि मलाई पनि झ्वाक चल्यो । भनिदिएँ, ‘यो चुनावी समिति हो । म निर्वाचित समितिलाई हिसाब बुझाउँछु ।’ राखेपले निर्वाचन गराउनका लागि भन्दै क्यान पुनःगठन गरेको थियो । त्यसै पनि क्यान तदर्थवादमै टिकिरहेको थियो ।
हमाल नेतृत्वको समिति अलि बढी नै मविरुद्ध लागेको थियो । जबकि, हिसाबकिताबका मुख्य साक्षी सचिवका रूपमा उनी आफै थिए । बैंकिङ खाता हामी दुईको हस्ताक्षरबाट चल्थ्यो । मैले त्यतिबेला उनको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन । त्यसैले भनेको थिए, ‘निर्वाचित समितिलाई हिसाब बुझाउछँु ।’ साथीहरूको त्यो व्यवहारले म निकै तनावमा परेँ । मन दुख्यो भने तन पनि दुख्दो रहेछ सायद । म बिरामी नै परे । पारदर्शी हिसाबमा गडबडी भएझैँ के भाका राख्नु भनेर मैले सन्चो भएपछि आर्थिक आयव्यय बुझाउने वचन दिएँ । तैपनि, साथीहरूले मानेनन् । उल्टै घुक्र्याए, ‘भोलि नआए पत्रिकामा सूचना छाप्छौँ ।’ हलेदो हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि के कोट्याउनू ? मेरो खुट्टा तानेर आफू अग्लो देखिने मनसाय बुझेपछि विवाद छताछुल्ल गरेर जुर्मुराउन लागेको क्रिकेटलाई बदनाम गर्न मन लागेन । त्यसैले बिरामी भए पनि नवगठित समितिलाई तत्काल हिसाब बुझाउन जाने निधो गरेँ । एलर्जीले मुख सुन्निएको थियो । रुमाल बाँधेर हिँड्नु पथ्र्यो । म मुखमा रुमाल बाँधेर क्षेत्र नं ५ को कार्यालय गए ँ। बिनाकसुर पनि कुनै अपराधी या अभियुक्तझै अनुभूति भइरहये । शङ्काको कुनै गुन्जायस नदिएरै मैले सरासर पम्राणसहित हिसाबकिताब बुझाए । क्रिकेटमा मेरो योगदान बिर्सेर साथीहरूले अपमान गरेझै लाग्यो । शाहीकाल थियो, शाही सरकारले मनोनीत गरेको कार्यसमिति थियो । त्यसैले धेरै पौठँेजोरी खेल्नु पनि भएन । तर, एउटा निवर्तमान अध्यक्ष र क्यान केन्दी्रय सदस्यप्िरत हमाल दाइ टिमले हिसाब फस्र्यौट गर्ने निहुँमा मेरो हुर्मत लिन खोजेको थियो । आज पनि सम्झिदाँ उदेक लागेर आउँछ । जिम्मेवारीबाहिर रहँदा पनि दाता संस्थाले मलाई नै सम्झिए । छात्रा क्रिकेट दोसा्रे संस्करणका लागि क्षेत्र नं. ५ फेरि पनि प्लान नेपाललाई गुहार्न पुग्यो । कार्यक्रम प्रमुख गोपाल नेपाल थिए । उनले मलाई बोलाए । मैले राम्रैसँग सहजीकरण गरिदिए । मलाई त महिला क्रिकेटले एउटा लय समातेको हेर्ने रहर थियो, जुन मेरो सपना थियो । दोस्रो संस्करण २०६२ का लागि ६ लाख ९८ हजार ८ सय ८० को पस््रताव स्वीकृत भयो ।
क्यान क्षेत्र नं. ५ को व्यवहारबाट रुष्ट साथीहरूले मलाई त्यतिबेला कोहलपुर युथ क्लबबाट महिला क्रिकेटलाई निरन्तरता दिऊँ भनेर लबिङ गरेका थिए । मैले चाहेको भए हुन्थ्यो पनि । तर, मनले मानेन । म पदमा रहुँ या नरहुँ, संस्थालाई मान्नुपर्छ । व्यक्तिले आँट्ने हो, संस्थाले संस्थागत गर्ने हो । तर, साथीहरू यति कतृघ्न भए कि महिला क्रिकेटको परिकल्पनाकार अनि थालनीमा नेतत्ृव गरेको मलाई निम्तोसमेत गरेनन् । तर, महिला क्रिकेटको निरन्तरताले मलाई खुसी नै लाग्यो । दोस्रो संस्करणमा ३२ विद्यालय सहभागी थिए ।
(एलबी क्षेत्री नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने पहिलो पुस्ताका खेलाडी हुन् । पहिलो एसीसी ट्रफी (मलेसिया) मा टिम उपकप्तान रहेका उनले दोस्रो एसीसी (काठमाडौं) को कप्तानी सम्हाले । भारतीय शहर कोलकाताबाट क्रिकेट शुरु गरेर ए डिभिजन खेलेका क्षेत्री नेपाल आएर क्लवस्तरीय प्रतियोगिता खेल्दै १९९८ मा राष्ट्रिय टिमको कप्तान भए । उनकै नेतृत्वमा नेपालमा महिला क्रिकेटको उदय भयो । कप्तान १९९८ पुस्तकमा क्षेत्रीले अति राजनीतिले दिशाविहीन बन्न पुगेको नेपाली क्रिकेट, आफ्नो खेल जीवनका अनुभव, संघर्ष र भोगाईलाई उतारेका छन् । क्रिकेट बुझ्न चाहनेका लागि यो पुस्तक बरदान नै सावित हुने विश्वास गरेका छौ ।
क्रियटिभ बुक्सले प्रकाशन गरेको क्षेत्रीको ‘कप्तान १९९८’ पुस्तकको सहलेखन कुमार श्रेष्ठ र सम्पादन जनक नेपालले गरेका हुन् । उक्त पुस्तकको अंश प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं । हरेक शनिबार क्रमशः प्रकाशन हुने पुस्तक अंश पढ्नका लागि www.sunpani.com लाई लाइक गर्नुहोला । कोहीलाई यो पुस्तक चाहिएमा क्रियटिभ बुक्सका अध्यक्ष टीएस ठकुरी (९८५१०९३२३४) लाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।)
बाहिरी जिल्लाका चार जनालाई कोरोना
करोडौ लिएर मेनपावर सञ्चालक फरार
पति काँग्रेस, पत्नी राप्रपा
विभिन्न जिल्लाका चार जनालाई कोरोना
सिडिओलाई सेवाग्राहीले फोनमा भन्छन्, ‘सर, मेरो काम भएन के गर्ने ?’
डुडुवामा सात सय मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर बन्दै
कहिले फिर्ता हुन्छ विद्यार्थीको १५ प्रतिशत शुल्क ?
बाँकेमा एआरटी सेवा लिने ५ सय २६ जना